[YEPAMUTEMO] dr.fone Toolkit - Android Data Recovery The Best For 2017
Munyika 1st date kupora Software kuti Android smartphones uye mahwendefa.
Kupora mifananidzo, mavhidhiyo, neshamwari, mameseji, kudanwa matanda, uye zvakawanda.
Kunoenderana 6000+ Android namano.
Special Bayirai (musi Mobile Only)
Kutenga Windows Buy nokuda Mac
Cherechedza: Shandisa purogiramu Windows / Mac Os kombiyuta yako.
Kurasika Data kubva Android?
Kurasika date haina akarasika. Tinogona kupora dzadzimwa mafaira musi Android kubva zhinji zvakafanana apa.
Kurasika date pashure fekitari dzosera
Kurasika mashoko nokuda Os update
Data zvisipo pashure Rooting kana ROM kwepfumo
Ongorora & Preview kuti Free
Kana iwe hauna pfungwa pamusoro kana wako akarasika mashoko pamusoro Android inogona akapora kana kwete, unogona kukopa akasununguka kutongwa shanduro kuti atarise kutanga. Mushure Ongororo, unogona vaone akawana mashoko. Hazvina free.
Izvi Android date kupora Software anokubvumira kupora dzadzimwa kana akarasikirwa neshamwari, mameseji, mapikicha, WhatsApp mashoko, mumhanzi, mavhidhiyo uye mamwe magwaro.
Kamwe ukaona kwenyu akarasika mashoko pamusoro Android mudziyo, unogona kusarudza chero chinhu chaunoda uye kunze pakombiyuta yako chete watinya.
Support 6000+ Android yokutevedzera
Unokwanisa kushandisa ichi Android date kupora App wokugadzirisa mashoko anopfuura 6000 Android dzeserura uye mahwendefa kubva Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, etc. The mazita vakatsigira mano ichiri kukura nokukurumidza.
Midzi & Unrooted Android namano
Izvi Android date kupora chokushandisa anoshandira zvose midzi unrooted Android mano, asi hahuzongoparari kushandura chinhu pauri. The mudziyo midzi achawedzerwa midzi, uye unrooted munhu kuramba.
Kupora Data kubva SD Card
Sezvo kune SD kadhi iri Android, unogona zvakananga tarisei foni yako kana piritsi, kana batanidza naro kadhi muverengi. Vose basa.
Izvi Android date kupora Software chete anoverenga mashoko enyu Android pafoni kana piritsi. harizovi kuchinja chinhu, chengeta kana achigarira maoko chinhu mudziyo wako vamwe.
Android date kupora rinonzwika rakanaka nyanzvi chinhu. Chaizvoizvo, asi vanhu pasina nyanzvi unyanzvi kombiyuta anogona kugadzirisa zviri nyore. Scan ratidzo uye achapora. All unofanira kuita zviri izvi mwana matanho matatu.
All vanoshandisa uyu Android date kupora Software vanogona kunakidzwa akasununguka ndiwedzere mune ramangwana. Customer basa iri zvaisanganisira.
Tarisei wokugadzirisa dzadzimwa umboo kubva Android namano
Tarisei dzenyu ndangariro kadhi iri Android mudziyo wokugadzirisa mashoko
Edza It Free For Days 30!
Kupora date zvose, kana vakasarudzwa mafaira
Chete unogona kuwana nhoroondo yako uye mafaira
3 nyore nhanho: batanidza, tarisei uye achapora pamusoro Android
" Dr.fone Toolkit ndiye pakombiyuta App nokuda Windows hrs. Just gadza nayo, ipapo nokuparura program yacho uye batanidza mudziyo wako kombiyuta yako. Kubva ipapo, unogona kutsvaka dzadzimwa photos mameseji, mavhidhiyo, neshamwari uye zvakawanda zvakanaka. Dzidza zvakawanda >>
- From Softonic, aitungamirira-software Download nzvimbo vanhu mamiriyoni 100 pazuva pamwe
" Dr.fone Toolkit Android ane nyore kushandisa inowanikwa kuti anogona kuva navhigesheni kubudikidza vanoshandisa zvose kwevari unyanzvi. Hazvina lightweight uye haashandisi yakawanda ezvinhu zvedu. Yose zvayo, ichi pane inobatsira Kit aigona ibvai mashoma namuka mamiriro ezvinhu kana totaura date apore nokuda Android mudziyo wako. Dzidza zvakawanda >>
Ko Android ndiwedzere pamusoro S6 wangu 5.1.1 uye dzangu vokukurukura akanyangarika (sezvichaita zvako). Dr Fone akapora zvizere mazita (kunyange ndaifanira kubvisa foni yangu yokutanga). Inoshandisa chinjana nzira dzokubvisa mashoko. A mutengo chiduku kubhadhara makuru mbongoro okuponesa.
How kuwanazve Hapachisina Text anobva Android namano